Izay tian’ny mpanao politika ihany io e ! | 102 KARA
Izay tian’ny mpanao politika ihany io e !
Samy manao izay saim-pantany ny mpanao politika ka miziriziry amin’ny heviny.
Ny vondron’ny kandidà 21 nangataka ny hisintahan’ny kandidà 3 dia RATSIRAKA Didier – RAVALOMANANA Lalao ary RAJOELINA Andry dia efa nirotsaka teo amin’ny fampielezan-kevitra na dia efa fantatry ny maro, ary efa nolazain’ny komity manokana misahana ny fifidianana aza, fa tsy ho tanteraka amin’io datin’ny 24 jolay io aza ny fifidianana. Nilaza koa izy ireo omaly fa raha ilaina dia kandidà iray no hiarahan’izy ireo manohana.
Izy telo mianadahy mianaka kandidà kosa moa na dia efa nahazo ny sazy tsy fahazoana alàlana hiditra any Frantsa aza, miaraka amin’ny fangatahan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny hisintonany ny firotsahany ho fidiana, dia tsy nampiraika azy akory izany ary toy ny rano natondraka ny lamosin-kanakana fotsiny.
Koa samy MANAO AMBOLETRA sy manao izay danin’ny kibony ny mpanao politika ka tsy fantatra intsony izay hiafaran’izao raharaha izao ary mampametram-panontaniana hoe : » Misy Fanjakana ve eto sa tsia, ary an’ny vahoaka tokoa ve ny Fitondrana ? » Toa teny tsy misy dikany izany demokrasia izany fa ny DIDIN’NY BE SANDRY no manjaka eto amin’ny Tany sy ny Firenena..
3 juillet 2013 - 18 h 55 min Politique 837 vues